tips Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / tips
दुधको प्रयोग गर्दा ७ कुरामा ध्यान दिनुहोस्
Tags: alert-news, foodtips, tips, usingmilk
खबरडेस्क,६ चैत । दुध हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने पौष्टिक पदार्थ हो । दुधले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुर्याउनुका साथै मष्तिष्कलाई निकै फाइदा गर्छ । दैनिक रूपमा एक गिलास दुध पिउनाले तपाईको मष्तिष्कलाइ निकै फाइदा गर्छ । तर, यदी दुधको… बाँकी अंश »
गर्भावस्थामा महिलाले गर्न हुने र गर्नै नहुने कार्यहरु
Tags: do-don't, featured, foods, health, healthtips, pregnancy, tips
खबरडेस्क,३ चैत । गर्भावस्थामा महिलाहरुले गर्नहुने कतिपय कामकुराहरु छन् जस्ले आमा र बच्चाको स्वास्थ राम्रो गर्छ । त्यसैगरि गर्भावस्थामा कतिपय कामकुराहरु छन् जुन गर्नै हुँदैन र गरेको खण्डमा आमा तथा गर्भमा रहेको बच्चालाई हानि पुर्याउँछ । कतिपय अवस्थामा त गर्भमा… बाँकी अंश »
कसरी हटाउने घाँटीको खसखस ?
Tags: alert-news, healthtips, in-focus, neckproblems, tips
खबरडेक्स,५ माघ । घाँटीको खसखस तथा समस्याको सीधा सम्बन्ध चिसोसँग हुनसक्छ। कमजोर मानिसलाई अलिकति चिसो लाग्दा पनि घाँटी नाक समात्ने हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा तुरुन्त चिकित्सककोमा जानुभन्दा पहिले आफू स्वयम्ले नै घरेलु उपचार अपनाउन सकिन्छ। नुनपानी कुल्ला गर्ने: संसारभर नै गरिएका… बाँकी अंश »
सिघ्र स्खलनमा के गर्ने
Tags: alert-news, fast-ejaculation, healthtips, sextips, tips
खबरडेक्स,४ माघ । यौन सम्र्पकका वेला धेरै पुरुषमा सिघ्र स्खलनको समस्य हुने गरेको छ । यसवाट यौन जीवन नै प्रभावित हुन सक्छ । यदि यस्तो समस्य भए पहिलो यौन सम्पर्क पछि फेरी दोस्रो पटक सम्पर्क गर्न सकिन्छ । दोस्रो पटकको… बाँकी अंश »
तपाईको मोबाईलमा वाईफाई देखाएन यसो गर्नुहोस
Tags: alert-news, android, featured, mobile-tips, smartphones, tips, visibility, wifi
खबरडेक्स, ६ पुस । सबैभन्दा पहिले आफ्नो डिभाइसको सेटिङमा गएर General ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि त्यहाँ Reset Network भन्ने ट्याब हुन्छ, त्यसमा ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् । अब आफ्नो डिभाइसलाई वरपर रहेको वायरलेस राउटरको छेउमा लिएर जानुहोस् र आफ्नो डिभाइसमा… बाँकी अंश »
एन्ड्रोईडमा आईडी चोरी र छलबाट बच्ने ६ तरिका
Tags: alert-news, android, fraud, id-theft, nepaljapan, sidebar-featured, tips
खबरडेक्स,२५ मंसिर ।
यी कुरा ख्याल राख्नुस् रातिमा खाना खाँदा !!!
Tags: alert-news, eating, foods, heallth-tips, in-focus, nepaljapan, night-time, tips
खबरडेक्स, १५ मंसिर । रातिमा भोजन गर्नु स्वास्थ्यका लागि जति जरुरी छ त्यो भोजन कतिबेला गर्ने भन्नर् समय त्यो भन्दा बढी जरुरी छ । चिकित्सकहरुले रातिमा सुत्नु भन्दा कम्तिमा २ घण्टा अघि खान सुझाव दिन्छन् । यदि तपाइँ रातिमा ढिला… बाँकी अंश »
यौन चाहानालाई यसरी पुरा गर्नुहोस्
Tags: alert-news, child-sexual-harrashment, featured, health, nepal-japan, sex-tips, tips
खबरडेक्स, ९ मंसिर । मस्तिष्कमा रहने नियोकोर्टेक्सले यौन चाहना तीव्रता ल्याउँछ यो हटाउँदा चाहनामा कमी पाइएको छ । त्यस्तै वाइरिसफम कोटेक्सले यौन इच्छा सुपुप्त अवस्थामा राख्न सहयोग गर्छ । यसलाई हटाउँदा पुरुषहरुमा सहवासको अत्यधिक भोक बढेको प्रयोगले देखाएको छ ।… बाँकी अंश »